Forex inControl EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex inControl EA ၏Forex inControl EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် Forex inControl EA ၏ 1
ငွေကြေးစွမ်း: AUDUSD, EURGBP
မှတ်စု: Forex inControl ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏အောက်ပါအဆင့်မြှင့်ယခုရရှိနိုင်ပါ:
- Forex inControl ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် EA ကိုကောင်းမွန်သောချိန်ညှိချက်များဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သော်လည်း Accelerator မပါ ၀ င်ပါ။ $ 270
- Accelerator ပါ ၀ င်သော $ 310 တွင်ကောင်းမွန်သောချိန်ညှိချက်များဖြင့် Forex inControl ကိုပြန်လည်မွေးဖွားလာသည်။
Forex inControl EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Metatrader4အတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိသော FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
Forex inControl EA ၏ တစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်းသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များကဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် 100% အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုစနစ်!
ဤ Forex EA ၏ ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများပေါ်တွင် အခြေခံ. နှစ်ဦးငွေကြေးအားလုံးအပေါ်အမြတ်ဥစ္စာတိုးပွားနေသည်။ အဆိုပါ Forex စက်ရုပ် အမြဲတိုင်းကုန်သွယ်မှုများအတွက်အကျယ်ချဲ့အန္တရာယ်သတ်မှတ်ပေးသော StopLoss, အသုံးပြုသည်။
ဒါ့အပြင်တစ်ဦးလည်းမရှိ ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု ထိုအရောင်းအရှေ့တော်၌အခွင့်အလမ်းတွေကိုနှင့်အများကြီးအရွယ်အစားနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်။ Martingale, မဟုတ်သောနှင့်ဦးရေပြားစနစ်များကိုဒီကအသုံးပြုကြသည်မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး.
သငျသညျသစ်ကိုဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင် အဆင့်မြှင့် ဒီ FX စက်ရုပ်သငျသညျအပျေါကုန်သွယ်မှုနိုင်ပါလိမ့်မည် AUDUSD နှင့် EURGBP 30 မိနစ်အချိန်ဘောင်အပေါ်ငွေကြေးစွမ်း။
အသုံးပြုခြင်းသည်ဤ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစိတ်ခံစားမှု, အနုတ်လက္ခဏာခွအေနမြေား, ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းရန်ပင်လိုအပ်သဖြင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါဟာ 100% ဈေးကွက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူပရိုဂရမ်အလုပ်လုပ်စောင့်ရှောက်!
Forex inControl EA ၏ အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံနှစ်ဦးစလုံးကုန်သည်များများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အလွန်အမင်းအကြံပြု software ဖြစ်ပါသည်။
Forex inControl EA - ကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်းကိုခက်ခဲသည်
Forex ကုန်သွယ်အတွက်အရေးအပါဆုံးသင့်ရဲ့သိုက်ဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သင်မှန်ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုလိုပါတယ်။
Forex inControl EA ၏ သင်သည်မည်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်သင်မျှော်မှန်းထားပါတယ်ပိုပြီးဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်အတိအကျပုလုပျသငျ drawdown ညွှန်ပြခွင့်ပြုပါတယ်။
ဤ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အလိုအလျှောက်ပေါ်မှာရှိသမျှအမိန့်အဘို့အ StopLoss သတ်မှတ်ပြီးအလွန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။
Forex inControl EA -2အမျိုးမျိုးသောငွေကြေးအတွဲများပေါ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်
အဆိုပါ Forex inControl EA ၏ အလုပ်လုပ် algorithm ကိုဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအများအပြားငွေကြေးအားလုံးအပေါ်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်တစ်လောကလုံးဤမျှလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် developer များကသူတို့ကိုသာအကောင်းဆုံးနှစ်ခုယူခဲ့ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအားလုံးအပေါ်ထရေးဒင်းစနစ်တည်ငြိမ်သောအမြတ်အစွန်းစောင့်ရှောက်အပေါင်းတို့နှင့်ငွေကြေးအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှ drawdowns တစ်ခုချင်းစီမှအခြားအအာမခံထား။
Forex inControl EA - စွန့်စားရမှုများနှင့်အမြတ်အစွန်းအမျိုးမျိုး
တစ်ဦးချင်းစီကတခြားများအတွက်သီးခြား drawdown ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူအများအပြားငွေကြေးအားလုံးအပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းနှင့်အန္တရာယ်များကိုမျိုးစုံမှအကြီးအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ဤသူသည်သင်တို့အနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်များမှာတည်ငြိမ်အမြတ်အစွန်းကိုလက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Forex inControl EA - 14 နှစ်များအတွင်းသမိုင်းရလဒ်များ
သမိုင်းစမ်းသပ်မှု (backtests) ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးတည်းသာနည်းလမ်းစနစ်အနာဂတ်အတွက်စျေးကွက်အပေါ်ကုန်သွယ်မှုသငျ့သညျလမျးဟောကိန်းအရသိရသည်။
ဤသည်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုချင်းစီငွေကြေးကို pair တစုံအပေါ်နောက်ဆုံး 14 နှစ်ပေါင်းတစ် backtest စေရန်ခွင့်ပြုခဲ့!
ဤရွေ့ကားအံ့သြရလဒ်များကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသတင်းနှင့် Forex ဈေးကွက်ထဲမှာအပြောင်းအလဲများအားလုံးကြင်နာဖို့တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။
AUDUSD - $ 14 မှ $ 10,000 မှ 207,033 နှစ်များ
EURGBP - $ 15 မှ $ 10,000 မှ 150,157 နှစ်များ
Forex inControl EA - Accelerator စနစ်၏နောက်ဆုံးရလဒ်များ
အဆိုပါ Forex inControl အဖွဲ့သည်စျေးကွက်အတွက်အပြားကာလအတွင်းတူညီအန္တရာယ်များနှင့်အတူအများကြီးပိုကြီးတဲ့အမြတ်အစွန်းရဖို့ခွင့်ပြုအသစ်တစ်ခု Accelerator MODE တီထွင်ခဲ့သည်။ သငျသညျ Accelerator mode ကို (ကစံ mode မှာကုန်သွယ်) နှင့်မရှိဘဲ, အချိန်ရဲ့ကာလတူများအတွက် backtests စစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ကိုယ်အဘို့မြင်နိုင်ပါသည်။
AUDUSD - $4မှ $ 10,000 မှနှစ်ပေါင်း 759,216 - အရှိန်မြှင့်သည် ON
AUDUSD - $4မှ $ 10,000 မှနှစ်ပေါင်း 24,437 - အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း
EURGBP - ဒေါ်လာ4မှ $ 10,000 မှနှစ်ပေါင်း 113,073 - အရှိန်မြှင့်သည်
EURGBP - ဒေါ်လာ4မှ $ 10,000 မှနှစ်ပေါင်း 19,473 - အရှိန်လျှော့
အဆိုပါ backtest ရလဒ်များကြောင်းအတည်ပြုဖို့ Forex inControl EA ၏ လုံခြုံပြီးအမြတ်အစွန်းပါ!
ဒီနေရာတွင်ကဒီ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးထံမှရအရာကိုတစ်ဦးကနမူနာင်
Forex inControl EA ၏အန္တရာယ်မရှိဘဲလစဉ်လတိုင်းအမြတ်အစွန်း generate လိမ့်မယ်တဲ့ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖြစ်ပါသည်
ဤသည်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး set up လုပ်ဖို့အလွန်အမင်းလွယ်ကူသည်, ဒါကြောင့်အလိုအလြောကျ2ငွေကြေးအားလုံးကုန်သွယ်မှု
အဆိုပါ Forex Robot ကုန်သွယ်၏, ကွန်ဆာဗေးတစ်ပုံမှန်နှင့်တက်ကြွစတိုင်များရှိပါတယ်
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် inControl EA ၏ ဒီကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 84% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: အဆိုပါရောင်းချသူ 60 ရက်အတွင်းအပြည့်အဝပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်ပေးပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ပါတယ်အတိုင်းဤကုန်သွယ် software ကိုလုပ်ဆောင်မပါဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံပြန်ရလိမ့်မယ်။ သင့်အကောင့်ရဲ့ချိန်ခွင်လျှာအတွက် drawdown 40% ထက်ပိုပါကလည်းတစ်ပြန်အမ်းငွေကိုသင်ထောက်ခံအုကူံပ settings ကိုအသုံးပြုအခြေအနေပေါ်တွင်ချက်ချင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။
Forex inControl EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 270 မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင် Forex inControl EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Forex INCONTROL EA ၏ - အမြတ် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - ဒီဇင်ဘာ 2017 UPDATE ခရစ္စမတ်အထူးကမ်းလှမ်းချက် - 15% OFF ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! နှစ်ဦးစလုံး Forex inControl EA ၏မူကွဲယခုလျှော့စျေးနှုန်းမှာရရှိနိုင်ပါ! ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/forex-incontrol-ea-review/ Forex inControl EA ၏သငျသညျကိုမွငျခငျြတဲ့သူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များကဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်း FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးနှင့် 100% အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖြစ်ပါသည် အောင်မြင်ဖို့! ဤသည် Forex EA ၏4ငွေကြေးအားလုံးအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့်အကျိုးအမြတ်အမြတ်အပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါ Forex စက်ရုပ်အမြဲတိုင်းကုန်သွယ်မှုများအတွက်အကျယ်ချဲ့အန္တရာယ်သတ်မှတ်ပေးသော StopLoss, အသုံးပြုသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးလည်းမရှိ... ဆက္ဖတ္ရန္